Ixhaswe | January 2022
Ixesha elizayo lokwenyani kwiNkqubo yeMfundo yanamhlanje
Namhlanje umhlaba uphantsi kweenguqu ezininzi ezibangelwe yiVR, kwaye olu tshintsho lunamathuba onke okwenza uhlengahlengiso olubalulekileyo kwinkqubo yesikolo yanamhlanje.
Ukubuyiswa kweDatha ye-EaseUS, eyona Wizard yokuBuyiselwa kweDatha yaSimahla 2020!
I-EaseUS yokuBuyisa iWindows kwiWizard yasimahla ikunceda ukhawuleze ufumane iividiyo ezilahlekileyo, amaxwebhu, imifanekiso kunye nokunye okususwe kwidatha esusiweyo, elahlekileyo okanye ifomathiweyo, kwi-desktop yakho, kwiLaptop, nakwidrive drive esuswayo ngokukhawuleza nangokulula.
Uyenza njani kwaye ususe abasebenzisi baWindows abatsha Windows 10
Nantsi indlela yokwenza nokulawula iiakhawunti zomsebenzisi zeMicrosoft, Iindlela zokuzikhusela zibandakanya amanyathelo okucima / ukucima umphelo iiakhawunti zomsebenzisi Windows 10
Ungayifumana njani kwakhona ifayile esuswe unaphakade kwi Windows 10
Uzicime ngokuchanekileyo ezinye iifayile okanye iifolda ezivela kwi-lapotp? Ungakhathazeki nazi iindlela ezahlukeneyo zokufumana kwakhona iifayile ezisusiweyo Windows 10, 8.1 kunye no-7!
Eyona nto iphambili kwi-5 Windows 10 Izixhobo zokuBuyisa iphasiwedi ngo-2020
Nazi izixhobo eziLungileyo ezi-5 zokuBuyisa iWindows ngokuKhangela onokuzisebenzisa ukuseta kwakhona okanye ukuguqula iphasiwedi elityelweyo yekhompyuter yakho yeLaptop esebenzayo Windows 10, 8.1 kunye no-7
Ungaziguqula njani iiDVD kwiiwindows 10 zasimahla (Lungisa iDVD ingadlali iingxaki)
Nantsi inyathelo ngenyathelo lesikhokelo sokuguqula ingqokelela yeeDVD ezindala kwifomathi zedijithali usebenzisa iWinX DVD Ripper Platinum simahla! (Lungisa iDVD ingadlali ngxaki)
Ungayifumana njani kwakhona iFayile ecinyiweyo Windows 10, 8.1 kunye no-7?
Ukufumana iingxaki ngokufumana kwakhona iifayile ezisusiweyo kwiLaptop yeWindows okanye ikhompyuter, fumana ukubuyiswa kweDatha kwisisombululo sakho sokumisa kwakhona
Ungayiguqula njani i-WPS iye kwi-DOC, kwi-DOCX okanye kwi-PDF nge-intanethi
Ngaba ujonge isiguquli seWPS ukuguqula amaXwebhu eWPS abe yi-doc, i-docx okanye i-PDF? Apha usebenzisa onlineconvertfree ungaguqulela ii-wps kwi-doc kwaye ukhuphele ngokulula kwiiseti ezi-3
Isoftware yokuGcina kunye nokuBuyisa Windows 10
Zininzi iindlela zokwenza isipele iPC yakho Apha sidwelise iintlobo ezahlukeneyo zoGcino ngaphakathi Windows 10
Izizathu ezi-5 zakho Windows 10 Ikhompyuter iqhuba kancinci
Ngaba uqaphele Windows 10 Ikhompyuter isebenza kancinci? Nazi izizathu ezi-5 zokuba kutheni le nto inokwenzeka kwaye ungayilungisa njani windows 10 yokusebenza okungcono
Ukujongwa kwakhona kweBesoft Data kunye nelayisensi yasimahla exabisa i- $ 49.95
Ukubuyiselwa kweDatha kwiDatha yeDatha ye-iBesoft ekhuselekileyo nenamandla, kunceda ukubuyisa iifayile zakho ezicinyiweyo, ezifomathiweyo okanye ezilahlekileyo kwiikhompyuter, i-HDD yangaphandle, i-SSD, i-USB, imemori khadi, ikhamera yedijithali, njl.
Iphepha lokukhohlisa lokuqonda iiprotocol zeVPN
Iiprotokholi zeVPN zibaluleke kakhulu kwaye kuya kufuneka wazi ngazo. Ukuze kube lula kuwe, siyile le VPN Protocol Cheat Sheet.
Iindlela ezi-5 zokuFihla indawo okuyo kwi-Intanethi (Hlala ungaziwa)!
Ukufihla indawo okuyo kwi-intanethi kubaluleke kakhulu kunokuba abanye bakho banokucinga. Ke, ukukunceda ukufihla indawo okuyo kwi-intanethi, Nazi iindlela ezintlanu ezilungileyo onokuyenza ngazo.
Uphengululo lweMveliso-Ukulungiswa kweStellar yokuFikelela
Isikhokelo ku-A ukuya ku-Z Isikhokelo kwabaqhubi bezixhobo Windows 10, 8.1 kunye no-7
Yintoni umqhubi wedivayisi, Uthetha ntoni umphathi weDivayisi kwaye usebenza njani? Apha umphathi wedivayisi intsingiselo, inkcazo kunye nenkcazo!
Ungayiguqula njani kwaye uyicinezele iividiyo ezingama-4K ukuya kwi-MP4 kwiWindows 10
Uyithatha kanjani indawo yogcino lweefestile ezili-10 ze-OS kwilaptop nakwi-PC yeDesktop
Nazi iindlela ezimbini zokulondoloza Windows 10 I-OS yokwakha Yenza Windows 10 Inkqubo yemifanekiso kunye nokusebenzisa into yomntu wesithathu CloneGo evumela abasebenzisi ukuba bahlule ukwahlula inkqubo yeWindows njengefayile ecinezelweyo.
Gcina iShishini lakho likhuselekile ngezi Ngcebiso zoKhuseleko lweCyber
Apha siqokelele i-Intanethi elula ye-Intanethi okanye iiNgcaciso zoKhuseleko lweCyber ​​2019 ukuphucula umbutho wakho wokhuseleko lwe-cyber Gcina ishishini lakho likhuselekile kubagculeli, abagaxekile kunye nokunye.
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nePPP VPN
I-PPTP VPN yenye yezona zixhaphakileyo kwaye kulula ukuhambisa iintlobo zeVPN. Makhe sibone ukuba isebenza kakuhle kangakanani xa ithelekiswa nabanye.
Iindlela ezi-3 zokuSula ngokupheleleyo iDrive kwi Windows 10 PC
Ukuba uthengisa okanye unikezela ngokusisigxina ikhompyuter yakho, qiniseka ukukhusela idatha yakho ebuthathaka. Apha sidwelise iindlela ezahlukeneyo zokuSula ngokupheleleyo iKhompyuter yakho kwiHard drive